विष्णु माझीको स्वेच्छिक गुप्तवास कि बाध्यता ? - Himali Patrika
विष्णु माझीको स्वेच्छिक गुप्तवास कि बाध्यता ?
हिमाली पत्रिका १० भाद्र २०७८, 10:33 am
सालको पात टपरी हुनी, नहुनी सल्लैको तिम्रो माया कति छ कति हे बरै नलाउ पछि हल्लैको…
‘मैले उसको आग्रह टार्न सकिनँ र विष्णुको परिवारलाई मनाएँ,’ नारायण भन्छन् । त्यसपछि सुन्दरमणिले ०६१ साल वैशाख ७ गते एक हप्ताका लागि भनेर लेखनाथ महोत्सवमा विष्णुलाई लिएर गए । नभन्दै उक्त महोत्सवमा आयोजित लोकगीत प्रतियोगितामा सुन्दरमणि र विष्णुको जोडी पहिलो भयो ।
रिमोट सुन्दरमणिका हातमा ! सुन्दरमणिले विष्णुलाई आफ्नो जोडी बनाएर व्यवसायिक लोकगायनमा लगाए । बिहे नगरे पनि उनीहरु काठमाडौंमा सँगै बस्न थाले ।